Iingcebiso ezixhasayo kwi-Semalt On Indlela yokukhetha Uhlobo olulungileyo lohlobo lwe-SEO Campaign
Xa kuziwa kwi-SEO, ukwandisa abasebenzisi bakho abanokubambisana kunye nokudala izinto zakho zokubonakala kwintengiso ye-intanethi. Uphuhliso lweeNjini zoKhenketho luchaza ukusetyenziswa komxholo ophathelene nokuvelisa izithuthi kwiwebhusayithi yakho kwaye ubekwe phezulu kwizinto ezichanekileyo. Ukukhetha isicwangciso se-SEO esifanelekileyo kwinkampani yakho kukhokelela kwikampu ephumeleleyo.
Ukungahlawulwanga kwerekhodi yemihla ngemihla ephawulwayo njengemigqaliselo enkulu yewebhusayithi kunokukhokelela kwi-intanethi yebhizinisi. Ukuhlolwa kwewebhu kwansuku zonke kunika abathengisi be-intanethi kunye nabacebisi bamashishini ithuba lokuba bahlole indlela yabo yewebhu. Ukugqiba kwifomathi elungileyo ukuyisebenzisa kwiprojekthi yakho ichaza ngakumbi malunga neendlela eziza kudibana nazo kunye nenani leendwendwe ngokuchofoza kumaphepha akho.
U-Nik Chaykovskiy, uMphathi oyiNtloko wabaPhumelele kwabaThengi iSemalt , ubonisa apha iintlobo eziphezulu ezi-10 ezinokubumba impumelelo yexesha elizayo kwiinkampani ze-SEO.
1) Ukusetyenziswa kweegalari ezibonwayo kunye neefoto
Iimbali zemibukiso zibonisa indima enkulu xa kuziwa kwi-SEO. Ngokomzekelo, i-website enikezela iifoto zengubo eziphezulu ezi-10 ezimhlophe ezimhlophe kwiimarike ziya kufumana inani eliphezulu leendwendwe ngokupheleleyo.
2) Ukuveliswa kwezikhokelo zamaphepha amaninzi. Isikhokelo esinamaphepha amaninzi sichitha kulo lonke inkqubo ukubeka isivakashi kwisimo esihle sokuhlalutya isikhokelo.
3) Umxholo osekelwe kwividiyo. Ngaphezu kwe-75% yeendwendwe zikhetha ukufunda umxholo ngevidiyo ezifakiwe.
4) Iinkcazo zeenkcukacha eziyinkimbinkimbi..Idatha ebonakalayo ibamba ingqwalasela yabatyeleli kwiphepha lakho kunye nokwandisa uhlobo olufanelekileyo lwezithuthi kwiwebhusayithi yakho yezoshishino.
5) Umxholo oqingqiweyo okhokelela iindwendwe zibe yincwadana epheleleyo.
6) Umxholo opheleleyo. Umzekelo omhle yi-Wearable's Best Fitness Trackers yeqonga le-2016 okwangoku libeka kakhulu kwiimpawu zokuqulunqa.
7) Ukusetyenziswa komxholo ochaphazelekayo.
8) Impembelelo yezithuba zeblogi kwi-SEO.
9) Ukusetyenziswa kwamaphepha amfutshane afom.
10) Amanqaku aphethwe ixesha elide. I-Fermi Paradoxe ngumzekelo omhle wamanqaku athile awakhulunywe ixesha elide, isiqwenga esiphendulela kakhulu kwi-algorithms.
Isiqulatho esiphezulu kakhulu kwiidivaysi eziphathekayo sivame ukuguqula phezulu kwaye sithole amanqanaba aphezulu kwiiGoogle Algorithms. Ukusetyenziswa kwamanqaku ombane kunye nePSs inikeza iindwendwe ezinokuthi zizame ukuzivula. Impumelelo yephulo le-SEO ichaza ngakumbi ngezakhono zabathengisi be-intanethi kwintsimi yabo yobuchule.
Ukuphendula imibuzo ejikelezayo phakathi kweendwendwe zakho ezinokuthi ziza kunceda kakhulu kwimpumelelo ye-SEO campaign. Ukuzisa iingcamango ezintsha kunye neenkomfa zeprojekthi kwiprojekthi yakho yoPhando lweeNjini zoKhenketho inika ubume bezoqoqosho kwiindwendwe zakho. Gwema ukhuphiswano olunzima kwiimarike ngokulandelwa phantsi kweempembelelo ezibonakalayo kunye nezithuba ezisekelwe kwi-website yakho. Ukwandiswa kwendlela kunye nokunyanzeliswa komsebenzisi kubangele imizamo eyenziwe kwiphulo.
Yiyiphi ifomathi okanye uhlobo lomxholo omele ulisebenzise kulolukhankaso lwe-SEO? Lo mbuzo oye wajikeleza kwicandelo lokuthengisa. Njengomthengisi womxholo, thintela ukusetyenziswa kweentlobo zemixholo emitsha nje ngokuba zitsha kwiimarike. Nangona kunjalo, ungayihoxisi iifom ezitsha ezisetyenzisiweyo kwiimarike uze ucinge ukusebenzisa iindlela ezininzi zegama elingundoqo ukuze uhlangabezane neenkcukacha zakho.